Ọrụ n'Ịntanet - Malite Ọrụ na Emirates na Ike Anyị!
Ọrụ na Dubai maka Iranian
Ndị India na Kuwait Ọrụ
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at August 19, 2018
Ọrụ na Dubai for Iranian. Yes, it is we are now taking workes from Iran. And we are itinye ha na UAE. N'ikwu okwu n'ozuzu, otutu ndi ozo n'uwa nile. Iji ọrụ ụlọ ọrụ anyị iji nweta ọrụ na UAE. Anyị ahụkwala ugbu a ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-achọ ọrụ si Iran. Ndị otu anyị na-ele anya n’enye aka iburu ndi njem. And for now on, people based in Iran. Can chọta ọrụ na Emirates. And with this in mind, we are placing workers in Dubai, Abun Dhabi and Sharjah. So, using Ụlọ ọrụ Dubai City services. Can definitely nyere ndị na-achọ ọrụ aka.
Ndị na-asụ asụsụ Iran na-asụkarị. Ndị Peshia na-ekwu okwu ọnụ ọgụgụ isi. Ya mere, ọ bụrụ na ị kwenyere ịrụ ọrụ na UAE. Anyị dị ka ọkachamara na nlọghachi. O doro anya enyere gị aka ịbanye na United Arab Emirates. So, placing the potential new employee in UAE. Taking some time and it is not that quite easy to accomplish.
Kedu ka anyị si etinye ndị ọrụ si Iran?
Ebumnuche anyị bụ inyere mba ndị Arab aka. N'iburu nke a n'uche, anyị na-arụ ọrụ ná mba ọzọ. Ọhụrụ nwa akwukwo choro oru. Na-eche banyere ọrụ na Dubai. Ọfọn, anyị ụlọ ọrụ nbanye is what you really need. There are several points that we are using for any of our customers. For example, India na Ndị agha Pakistani. Ugbu a iji ụlọ ọrụ anyị. Ihe kariri nari asatọ nke ndi n’achu acho. Na-na-enweta ọrụ ọhụrụ trough anyị ụlọ ọrụ nnọchiteanya.
Ya mere, ihe anyị chọrọ n'aka ndị isi. A na-emeliteghachi ha. Ma mgbe anyị mee usoro nyocha usoro. Mgbe ahụ anyị na-enwe ihe niile dị njikere maka ikwurịta okwu na onye nwere ike ịchọta ọrụ. Anyị na-eduzi usoro nyocha. Na mgbe ihe niile dị njikere. Anyị ụlọ ọrụ na-etinye ọrụ Iranian na UAE. Ya mere, n'ozuzu ya, ọ bụghị nke ahụ siri ike. N'aka nke ọzọ, e nwere ọtụtụ ihe a ghaghị ime. Ọmụmaatụ usoro visa na ebe obibi. Ụlọ ọrụ anyị na-achịkwa ihe niile maka ndị na-achọ ọrụ.
Gbalịa ịbụ onye na-arụ ọrụ ma ọ bụ onye nwere ahụmahụ?
The Emirates na-akwụ onye ọ bụla ụgwọ. Na akụkụ na-adịghị mma, ụfọdụ n'ime ahụmịhe dị mkpa. Ọhụrụ Iranian gụsịrị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na ndị ọhụụ nwere ahụike dị ala. Aree nwere nke pere mpe ohere inweta oru na Dubai. There is a lot of people all over the globe. And in Obodo Dubai especially is full of foreigners. A lot of ndị si mba India ọmụmaatụ. Na-agagharị ná mba ha.
So, let’s faced in the right way. In the United Arab Emirates. Only the best workers and International expats. Getting a job that they want. So, definitely is much better to have extensive Ahụmahụ na Emirates. N'ezie, freshers na ụmụ akwụkwọ na-achọta ọrụ. Ma na nke ahụ, ọ ga-ewe ọtụtụ oge. Yabụ, ndị ọrụ ọ bụla ga-achọ! Mepere ọrụ na Dubai. Naanị ihe bụ oge. Anyị dị njikere nyere gi aka imata ihe banyere Dubai.
Kedu ka esi esi malite Dubai City Company?
Onwere uzo di nfe. Ihe niile choro bu CV emelitere. Ọzọkwa, na-akwado akwụkwọ. N’ezie, mezue ndebanye. Na weebụsaịtị anyị na UAE. Ndị na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ ga-enyocha. N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị anaghị eme nyocha nyocha nke ukwuu. N'ihi na anyi tukwasiri obi na ihe anyi nwere. Ọzọkwa na Ọrụ na Dubai maka Iranian na United Arab A ga-emeghe Emirates. Yabụ, gbalịsịa iji ụlọ ọrụ anyị otu oge. Ma lelee nke anyị ọrụ maka ndị ọrụ ná mba ọzọ.
Ya mere, naanị ihe dị mkpa. Maka ọrụ na Dubai maka ndi Iran. Emechara ndebanye zuru ezu na data zuru ezu. Companylọ ọrụ anyị dị ogologo na ahịa. Nke ahụ Anyị na-elekọta ndị na-achọ ọrụ ọhụụ ọ bụla. In case we need extra supports. We are giving a call to the applicant and trying to help. Our aim is to ebe as much Iranians in Dubai as we can. Because we all known. That Emirate is ebe kacha mma n'ụwa maka ndị ọrụ ụwa.
Ego ole ka m ga-atụ anya na Dubai?
Enwere ike ịtụ anya ụgwọ ụgwọ na UAE. O doro anya na ị ka elu karịa na Iran. N'ezie, ọ dabere na ahụmịhe nke onye na-achọ akwụkwọ na agụmakwụkwọ. Ma ọ bụrụ anyị chere na Iran ụgwọ ọrụ. Ego si Emirates. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ karịa akụkụ ọ bụla nke ụwa. Karịsịa na mba Gulf. Ọzọkwa, ọrụ kasị mma na-enye na UAE. Maka ndị nwere MBA agụmakwụkwọ. Dị ka ndị ọrụ IT ọkachamara na ndị njikwa. Ma n’ezie ndi banki na ndi dibia. Nke a dị ka mba Arabic ọ bụla. Naanị akụ na ụba ka nnọọ mma.
Ya mere, ndị ọrụ ọhụụ nwere nkà dị ala. Nweta ọrụ na Dubai na Abun Dhabi. Ma ọ bụghị nyocha kachasị elu nke ha na-atụ anya ya. Na ndị nwere nkà na ahụmahụ dị elu. Inwe ohere isoro ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ. Ụdị ma ọ bụrụ na ha na-atụ anya ịrụ ọrụ onu isii. Na akụkụ na-adịghị mma, njikwa oge bụ isi. Ya mere, ị ghaghị inye oge anyị. Ka anyị rụọ ọrụ na ngwa ngwa mmalite gị. Iji nye gị ezigbo onyinye ọrụ.
Ọrụ na Dubai na Iranian na-asụ Farsi?
Enwere ọtụtụ ọrụ ọhụụ na Dubai. Karịsịa maka ndị nwere asụsụ dị iche iche. Ruo ugbu a, enwere ihe dị ka 8% nke ndị Iran na Dubai. Nke ahụ na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde ndị ọrụ. Na-ekwukarị, e nwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle. Mgbe ebi na Emirates na karịsịa na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Na ego a nke ndị mmadụ na UAE. O kwere omume maka ọrụ ndị ọrụ ahịa nyere ọ ga-ebili.
Yabụ, ọ bụrụhaala na ị bụ onye Farsi na-ekwu okwu. Ikwesiri ileba anya na ulo oru anyi. Na otu esi eji usoro anyị. Ọzọkwa, ị bụghị naanị otu na UAE. Onwere otutu ndi Iran si ndi Dubai City Company. Na ọtụtụ n'ime ha na-achọta ọrụ anyị dị ka ezigbo nkwaga. Na-ekwukarị, ndi Iran nwere ike rụọ ọrụ na Dubai na ngalaba ndị a. Ndị ahịa, yana IT na imepụta akwụkwọ ntuziaka. Ihe a nile nwere ike ime na Dubai City.
Mmechi maka ọrụ na Dubai maka Iranian
Ya mere, nkwubi okwu a dị mfe maka ọrụ na Dubai maka Iranian. Ọ bụrụhaala na ị na-enwe ezigbo nkwurịta okwu. Ọzọkwa bi na UAE. Ma ọ bụ ọbụna achọ ọrụ ná mba ọzọ, otu anyị na-atụ anya inyere gị aka inweta ọrụ. Ihe niile dị mkpa bụ CV emelitere gị. Mgbe ahụ, onye ọrụ enyemaka anyị na-amalite ọrụ na profaịlụ gị. Ya mere, ike onyinye ọrụ ga-agba ndị na-achọ ọrụ. Ndị mmadụ ga-achọ ezigbo ọzụzụ chọta ọrụ na ụlọ ọrụ anyị.
The Dubai City Company giving 100% guarantee. For every nyocha oru application made through our company. We are itinye ndị ọrụ ná mba ọzọ. N’agbanyeghi otu o gha esi esi ike inweta oru na Dubai maka ndi Iran. Ndị otu anyị na-aga n’ihu iwetara gị onye ọrụ. Ndị otu mbanye na - enyere aka mgbe niile. And with this in mind, try our kwaliteghachi section. Because job searching in Emirates is what our team do the best. On the other hand, ị nwere ike ịlele ọrụ ụlọ ọrụ anyị online. Anyị na-enwe ezigbo nyocha.
Citylọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezigbo nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike nweta ugbu a nduzi, tips and employment in the United Arab Emirates ya na asusu gi.